Qor-Enroll in a Washington School (Somali) - Green Dot Public Schools
Isqoriinka Dugsiga Washington
Waad ku mahadsan tahay u doonitaanka ilmahaaga.ee Green Dot Washington. Dugsiyadeenu waa kuwo bilaash lagu dhigan karo oo aqbala dhammaan ardayda. Dugsiyada Green Dot waxay wadaagaan ujeeddo isku mid ah oo ah inay u diyaariyaan ardayda Kuliyadaha, hogaaminta, iyo nolosha. Waxaan hadda ku leenahay laba dugsiyada dhexe ah oo ah iskuxirka Dugsiyada Dadweynaha Green Dot ee Gobolka Washington oo ku yaalla Tacoma iyo Koonfurta-bari ee Seattle.
2017 - 2018 Foomka Baqtiyaanasiibka Online-ka (fasallada 6aad - 8aad)
Waxaan hadda aqbalayna qabashada codsiyada sanad dugsiyeedka 2017 -2018 ee ardayda!
Si aad u codsato diiwaangalinta ardayga galay fasallada 6aad, 7aad, ama fasalka 8 ee sanad dugsiyeedka 2017-2018, waalidka ama ilaaliyaha sharciga waa inuu soo buuxiya foomka bakhtiyaanasiibka (lottery) ee hoose.
Dhammaan ardayda soo codsada taariikhda bakhtiyaanasiibka kadib waxaa loo aqbali doona codsiyadooda sida ay u soo kala hor maraan.
Fadlan dooro fasalka iyo dugsiga aad rabto in aad codsato:
Fasalada adeegaya 6, 7 iyo 8 ee Tacoma, Washington
Kaliya adeegaya fasalka 6aad ee 2017-2018
2017 - 2018 Codsiyada Waraaqaha ee (fasallada 6aad - 8aad)
Green Dot waxay sidoo kale aqbalayaan codsiyada warqadaha ee loogu talagalay ardayda dhigata fasalka 6aad - fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2017 - 2018.
Si aad ugu soo gudbiso codsiga warqada ilmahaaga mid ka mid ah dugsiyadeena, fadlan foomka ku habboon ee hoosta guurso oo daabaco. Waalidku waa inay si toos ah ula xiriiraan dugsiga si ay u ogaadaan haddii uu dugsiga hadda leeyahay liiska sugitaanka. Dugsiyada waxay aqbali karaan ardayda sannadka oo dhan, oo markiiba waxay soo wargelin doonaan qoysaska haddii uu boos banaan yahay.
* Haddii aad xiisaynayso inaad iska diiwaangeliso sanad dugsiyeedka hadda (2016-2017), fadlan toos ula xidhiidh dugsiga.
Dugsiyada Dhexe (Fasallada 6-8):
Marka aad soo buuxiso codsigaaga, waxaad codsigaada warqada ah si toos ah u geyn karta dugsiga aad codsanayso ama email ugu dir cinwaanada emailada hoos ku qoran:
Dugsiga Dhexe ee Destiny: infodestiny@greendot.org
Ballan u Samayso Booqashada
Dugsiga Dhexe ee Destiny ee Tacoma ayaa waxuu bixinaya booqashooyinka dugsiga Talaadada 1aad iyo 3aad ee bisha 5:30 PM iyo Talaadada 2aad iyo 4aad ee bisha 9:00 AM. Haddii aad xiisaynayso inaad ka soo qeybgasho booqashada, fadlan naga soo wac (253) 722-5883.
Dugsiga Dhexe ee Green Dot Seattle wuxuu bixiyaa kulanada macluumaadka Khamiista 2aad ee bil walba 6:00 PM. Haddii aad xiisaynayso inaad timaado kulanka macluumaadka, fadlan naga soo wac (206) 305-0646 ama halkaan balan ka dhigo (RSVP).